Fikambanana Miafina | Diary 2014
FAHITA eran’i Afrika Andrefana ny fikambanana miafina, izay tsy mifidy foko sy kolontsaina ary fiteny. Izy ireny no mandrindra ny raharaha ara-tsosialy sy ara-politika ary ny fampianarana eo anivon’ny mpikambana eo aminy. Resaka fivavahana anefa no tena imasoany. Ny be mpikambana indrindra dia ny Poro (ho an’ny lehilahy) sy ny Sande (ho an’ny vehivavy). * Ny Poro, ohatra, miezaka “mifehy an’ireo fanahy mba hitondra soa ho an’ny olona ny zavatra ataon’izy ireny.”—Fampianarana 1986.
Ampianarina an’ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Poro ny tsiambaratelon’ireo fanahy sy ny filalaovana ody. Didididiana koa ny vatan’izy ireo mba hanolatra. Ampianarina fombafomba ifandraisana amin’ny fanahy ny mpikambana vaovao ao amin’ny Sande ary forana. Tsy forana intsony izao ny vehivavy any amin’ny faritra sasany.
Misy indray fikambanana miafina mametraka lalàna momba ny firaisana, ary mampiasa ody mba hanasitranana aretin-tsaina na aretina hafa. Nandritra ny ady an-trano teto Sierra Leone, dia nilaza ny fikambanana miafina iray fa tsy andairan’ny bala, hono, ny mpikambana ao aminy. Tsy marina anefa ilay izy!
Tsy azo resahina amin’ny hafa ny fombafomba sy ny zavatra hain’ilay fikambanana. Izay mandika lalàna sy fitsipika dia mety hovonoina ho faty.
^ feh. 3 Bondo no amantarana ny Sande any amin’ny toerana sasany.